Tijaabinta Urodynamic ee Columbus, OH | Caafimaadka PW
Tijaabinta Urodynamic ee Columbus, OH
Waa maxay Imtixaanka Urodynamic?
Imtixaanada Urodynamic waxay cabiraan shaqada kaadiheysta iyo waxtarka. Urodynamics waxaa loola jeedaa koox baaritaano ah oo la sameeyo si loo baaro kartida kaadiheysta ee faaruqinta joogtada ah iyo gebi ahaanba. Kooxdan baaritaanka ah waxay sidoo kale qiimeyn kartaa foosha kaadiheysta ee aan caadiga aheyn, keydinta kaadiheysta, iyo socodka kaadida. Baadhitaanadani waxay diiradda saarayaan marinka kaadi mareenka hoose, oo ay ku jiraan kaadiheysta, kaadi mareenka, iyo muruqyada muruqyada. Bixiyaha bukaanku wuxuu amri doonaa baaritaannada haddii isaga ama iyadu ay ka shakiyaan dhibaato ka jirta aagaggaas.
Maxaa loo sameeyaa?
Da'da sii kordheysa, cudurada raaga, dhaawaca, iyo uurka waxay dhibaatooyin ku keeni karaan nidaamka kaadi mareenka. Kaadiheysta iyo muruqyada kaadi mareenka ayaa daciif noqda da, da, cadaadiska oo kordha, iyo hoos u dhaca estrogen. Muruqyada daciifka ah ayaa laga yaabaa inay dhibaato ka keenaan faaruqinta kaadiheysta gebi ahaanba ama guud ahaan, kaadi ceshan la'aanta kaadida. Sababaha Imtixaanka Urodynamic waxaa ka mid noqon kara:
Kaadida oo si qasab ah loo sii daayo, sidoo kale loo yaqaan 'Incontinence' (waxay kaadi ahaan ku daadan kartaa qufac, hindhiso, qosol)
Si lama filaan ah, kacdoon xoog leh ayaa ku jira inaad kaadiso
Dhibaatooyinka bilaabida socodka kaadida
Kaadi xanuun badan
Dhibaatooyinka faaruqinta kaadiheystaada gebi ahaanba
Infekshannada kaadi mareenka oo soo noqnoqda
Waxaad ka fikireysaa in lagu sameeyo qalliin
Maxaa ku lug leh?
Bukaanka waxaa lagu farayaa inuu u yimaado baaritaanka kaadi haysta oo buuxda
Waxay bixin doontaa sambal nadiif ah oo kaadi ah ka dibna sii wadaysa inay ku madhnaato musqusha
Kadib waxaa laga codsan doonaa inay dharka ka siibato min sagxadda ilaa hoos. Kadib, waxay markaas dib ugu jiifsan doontaa miiska imtixaanka iyadoo cagteeda kujireyso walaaq, la mid ah baaritaanka pap. Muunad lama adeegsan doono.
Kateetar ayaa loo isticmaali doonaa in lagu sameeyo tijaabooyin kala duwan, oo ay ku jiri karaan haraaga wax-soo-saarka dambe, cadaadiska dib-u-caabbinta kaadi-mareenka, cystometrogram, iyo / ama cadaadiska dhibic daadka. Tani waxay qaadan doontaa qiyaastii 20 daqiiqo.
Baaritaanka ka dib, bukaanka waxaa la weydiin doonaa inuu ku soo laabto xafiiska 1-2 toddobaad gudahood si uu ugala hadlo natiijooyinka bixiyeheeda. Fadlan ballan ka sameyso bixiyahaaga wixii macluumaad dheeraad ah.
Imtixaanka Urodynamic FAQ
Waa imisa qiimaha tijaabada urodynamic?
Iyadoo ku xiran caymiskaaga iyo caymiskaaga, baaritaanka urodynamic wuxuu ku kici karaa meel kasta $350 - $1,000. Si aad fikrad fiican ugu heshid qiimaha saxda ah, la xidhiidh xafiiskayaga, waxaanu la xidhiidhi karnaa bixiyaha caymiskaaga si aanu u go'aamino kharashka ugu dambeeya ee jeebka ka baxsan.
Baaritaanka urodynamic ma xanuun baa?
Iyadoo bukaanada qaarkood laga yaabo inay la kulmaan xoogaa raaxo darro ah kateetarka awgeed, baaritaanka guud ahaan waxaa loo arkaa mid aad loo dulqaadan karo. Bukaanjiifka badankoodu uma sifeeyaan habka inuu yahay mid si gaar ah u xanuun badan waxayna ku sifeeyaan wax aad u yar marka la eego xumaanta.
Intee in le'eg ayay qaadataa in la sameeyo baaritaanka urodynamic?
Inta badan, baaritaanka waxaa lagu sameyn karaa gebi ahaanba ilaa 30 daqiiqo, taasoo sahlaysa in la galo fasax kasta oo qadada ah ama xitaa daaqada ugu yar ee la heli karo. Si kastaba ha ahaatee, tani way kala duwanaan kartaa iyadoo ku xiran dhowr xaaladood.